पालुङटार नगरपालिकाको सार्वजनिक सुुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न । – गोर्खा संसार
पालुङटार नगरपालिकाको सार्वजनिक सुुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न ।
गोर्खा संसार२०७५, ७ माघ सोमबार १५:४४
रविन्द्र कंडेल, माघ ७, गोरखा ।
पालुङटार नगरपालिका कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पालुङटार नगरपालिकाका नगर प्रमुख इ.दिपकबाबु कंडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम वडा नं. ७ को च्याङ्ली बिरुवाटारमा भएको थियो ।
कार्यक्रममा जनतका सवालहरुको जवाफ दिंदै नगर प्रमुख कंडेलले नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने र नगरपालिकाको विकासको लागी आफू कहिल्यै पछि नहटने बताउनुभयो । सोही क्रममा नगरपालिकाबाट प्रवाह भएका गतिविधीहरुको बारेमा चर्चा गरिएको थियो भने कार्यक्रममा नगरबासिहरुले उठाएका सवालहरुको जबाफ नगरप्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र देव भारती तथा अन्य विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले दिएका थिए ।
न्यायसम्पादन तथा महिलाका सबालमा केन्द्रित रहेर उप प्रमुख बसेलले जिज्ञासाको समाधान गर्नुभएको थियो ।
उप प्रमुख बसेलले स्वागत मन्तव्य राखेको सो कार्यक्रममा विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधिीहरुले नगरपालिकाको गतिविधी सुधारका लागी सुझावहरु दिएका थिए । कार्यक्रममा विकास निर्माण तथा नगरपालिकाका गतिविधीहरुका बारेमा बिभिन्न खालका प्रश्नहरु राखिएको थियो । नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पराजुलीले शिक्षाको विकासका लागी केही खाकाहरु कोर्न र नयाँ अभ्यास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षाको विकासका लागी विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागी नयाँ प्रावधान अपनाउने र सो का लागी माघ महिनाभित्रमाा विज्ञापन गरी स्थानीय नगर शिक्षा ऐन अनुरुप प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस शैक्षिक सत्रमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी नितिगत काम गरिसक्ने र आगामी शैक्षिक शत्रको शुरुदेखि नै प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिरेन्द्रेव भारतीले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा नगरपालिकाका सवै वडाका वडाध्यक्षहरु,नगरकार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, विषयगत समितिका प्रमुख लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थिति भई कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्ने सवैप्रति वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष बसन्त कुमार श्रेष्ठले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
२०७८, १५ मंसिर बुधबार २०:५७
२०७८, १५ मंसिर बुधबार १६:४९
२०७८, १५ मंसिर बुधबार १६:३९
२०७८, १५ मंसिर बुधबार १६:२५